SIDEE INJIRTA QULQULKA U AH BINI'AADANKU: MIYAY QANIINAAN AMA MAAHA, WAA MAXAY DHIBAATOOYINKA CAYAYAANKA HADDII AY DEGAAN GURI? - BEER CAGAARAN
Miyuu qoryo daran u yahay bini'aadamka iyo maxaa?
Woodlice waa cayayaanka yaryar ee ku dhufan oo ku nool xaaladaha qoyaan badan. Guryaha dabiiciga ahi waa qoryo dhaadheer, qashin qoyan, dhulka hoostiisa dhagxaan qoyan.
Licks ee aqalka - calaamad ah qoyaan badan iyo qoyaanka qolka. Dadka, shakhsiyaadka khatar kuma keenaan, laakiin muuqaalkoodu wuxuu keenaa cadaawad iyo nacayb. Mid kale oo ka mid ah arrimaha ku dhibta dadka ku jira dhismaha waa haddii cayayaankaasi ay qaniinaan iyo haddii kale. Marka xigta, tixgeli haddii ay yihiin waxyeello ama aan ahayn; Miyaan u baahanahay inaan ku burburiyo iyo sida loo sameeyo si badbaado leh caafimaadkaaga.
Mokrits waxay ka tirsan yihiin hoos u-soocida qallafsan sababtoo ah xaqiiqda ah in jirkooda uu daboolo qolof. Isku celcelinta dhererka mid ka mid ah tijaabada waa 1 cm. Waxqabadka xummadgu wuxuu dhacaa habeenkii, maadaama aysan u dulqaadan iftiin iyo iftiin. Galabtii, waxay ku soo aruurinayaan qoryaha dabaqyada (haddii tirada shakhsiyadu yar tahay) ay adag tahay.
Caawin Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qoryaha fudud, shakhsiyaadka kudhaca. Haddii ay jirto halis nolosha ah, waxaa loo geliyaa kubbado. Waayeelku waa 10-12 bilood.
Guryaha caadiga ah - hoosta musqusha, gadaasheeda gadaasheeda, agagaarka kuleylka, xirmooyinka ku leh kaydka khudradda. Tani waxay sabab u tahay qoyaan kor u kacay iyo joogitaanka microflora loo baahan yahay cunto. Injirta qoryaha, oo si aan macquul ahayn u marin habka neefta ayaa qolka ka soo gashay qolka hoose, saqafka ama dariiqa, waxay khatar gaar ah u tahay guriga. Shakhsiyaadkani si firfircoon ayey u jilaan, way adagtahay in loola dagaalamo.
Miyeey qaniinaan ama yartaan?
Qalabka afka ah ee shakhsiyaadka looguma talagelin qaniinyada. Iyada oo kaliya, waxaad cuni kartaa oo keliya cuncunka jilicsan ama qaybo yar oo dhir ah. Licks ma qaniinaan mana cunaan maadooyinka nool ee nool. Shakhsiyaadkaasi waxay yihiin kuwo jahawareer leh - waxay ku noolyihiin badeecooyin kala geddisan oo loo yaqaan "decomposition products".
Injirta guryuhu ma khatar u tahay dadka iyo maxaa? Warkan jiran ee qoraxdu waxay u qalantay sababtoo ah muuqaal aan fiicneyn iyo saadaalinta si ay isugu soo ururiyaan deegaanada. Qaar badan, haddii uu u egyahay uun noocaan oo kale ah, dareen joogta ah oo soo noqnoqonaya, iyo xiriir joogta ah (haddii xiniinyaha u muuqdaan sida ugu dhakhsaha badan ee aad iftiinka u soo jeediso) waxay dhalin kartaa diiqad ama burbur qotodheer.
Inkasta oo muuqaalka muuqaalku yahay, wakiillada shisheeye ayaa si ammaan ah ugu shaqeeya aadanaha. Kama qaniinaan, ha ku dhufanin cuntada, ha ku nadiifin biyaha, ha ku neefsan oo ha dhex gelin jidhkaaga. Laakiin shakhsiyadu ma quudiyaan oo kaliya nool, laakiin sidoo kale dhirta caleenta.
Waxaa jira khatar ah in qoryaha daboolka ah ee dhejiyayaashooda ay qaadi karaan cudurada faafa cudurada faafa (fangasta fangas, leexashada, bakteeriyada). Laakiin su'aashan ayaa ah mid aan caddayn, maxaa yeelay ma jirto caddayn cilmi ah iyo caddayn.
Woodlice wuxuu ku nool yahay musqusha, musqusha, qolka hoose ama jikada. Haddii ay shakhsiyaadkaas muuqdaan dhismaha, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u hesho xaaladda bullaacadaha iyo biyaha. Nidaamyadaas, cilladaha ama khaladaadka aan la arki karin indhaha dadku way muuqan karaan. Haddii dhibaatada aan la xalin, gumaysiga injirta ayaa kordhaya.
Wixii dhirta indoor-ka, qoyaankaas waxay ku jiraan khatarta ugu weyn. Waxyeelladu waa sida soo socota:
cunidda caleemaha nool;
waxyeelo iyo xadgudub ku salaysan sharafnimada;
xajinta ciidda (luminta oksijiinta ayaa dhacda).
Qoraalka. Calaamad muujinaysa in baadiyaha ay weerarto lafaha alwaax - godadka yaryar ee caleemaha iyo ubaxa. 14-15 maalmood ayaa ku filan shakhsiyaadka si ay ubax guriga uga dhisto gebi ahaanba engegay oo u dhintaan.
Miyuu ku haboon yahay in lala dagaallamo?
Licks ma laha waxyeello khaas ah, laakiin muhiim maaha in ay "ku tarmaan" iyaga oo ku jira guri dabaq ah. Xakamaynta cayayaanka waa nidaam muhiim ah oo muhiim ah. Xayawaankani ma qaniinaan dadka ama xayawaanka.laakiin waxay ku dhibeysaa raaxada guriga. Muuqaalka injirta qulqulka - calaamad u ah fayadhowrka degdegga ah ee qolka. Tani waxay u oggolaaneysaa burburinta wakhtiyada ku haboon shakhsiyaadka waxayna yareyneysaa halista faafidda faafka ama feerka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro qoryaha ka soo baxa miisaanka. Ugu dambeyntii waxay doorbidaan qalalan, cunaan sonkorta, qashinka cuntada. Gacanta ku jirta, qolofku waa ka yar yahay, boodhuna way dheer yihiin. Shakhsiyaadkaas ayaa iska leh cayayaanka. Laga soo bilaabo qeexida saxda ah ee nooca cayayaanku waxay ku xiran tahay waxtarka leh ee la dagaallanka.
Goorma ayaa ah burburka degdegga ah ee qoryaha?
Tirada shakhsiyaadka hoos uma dhicin, laakiin korodh.
Milkiiluhu wuxuu arkayaa injirta xitaa inta lagu jiro maalinta.
Shakhsiyaadka waxay u muuqdaan meel ka baxsan xuduudaha meel ama meel caadi ah (ka baxsan musqusha).
Burburinta cayayaanku waa inay noqdaan kuwo adag:
U hubso inaad bedesho qoyaanka aqalka: yareyso qoyaanka, hubi habka hawada iyo xaaladda dhuumaha.
Farqiga musqusha iyo musqusha ayaa lagu talinayaa in la xiro.
Qashin-qubka oo ku urursan musqusha, hubi inaad ka saarto - waxay ka saari doontaa injirta qoryaha.
Hadafin dheeraad ah oo la adeegsado hababka farsamada, dadweynaha iyo kiimikada. Doorashooyinka ugu horeeya ee 2-da ah waxay waxtar leeyihiin oo keliya marka arthropods aysan wali helin wakhti ay ku tarmaan oo ay degaan.
Habka farsamada Raashinka dadweynaha Kiimikooyinka
Qaado soodhow, qoyso. Habeen habeenkii meelaha injirta qulqulaya (habeenkii, shakhsiyaadka waxay ku fuuli karaan ulo qoyan). Aroortii, si taxaddar leh uga soo qaad qolka, ka dibna dib u rux. Ku celi nidaamka 2 jeer.
Sidoo kale jimicsiga jirka ee ku yaala geesaha musqusha, waxaad ku rusheyn kartaa milix ama baaldi ku dari kartaa lime.
Samee 2-3 godad baradho ah ama dabacasaha oo ka tag habeen. Dalagyada xididkan waxaa ku jira qoyaan badan, taasoo soo jiidata qoryaha. Cagaarka subaxda leh ee ay kudhacaan iyaga oo ku jira shakhsiyaad si ay u burburiyaan.
Isku qas karootiga cas, casuunta tubaakada, soodhaha (1: 1: 1). Isku duub biyo, isku dar. Xalka ka soo baxa ee lagu hirgelinayo goobaha isku dhafan.
Gett, Tarrax, Mole waxay ku habboon yihiin darbiyada iyo sagxadaha. Waxaa ka mid ah caalamku macnihiisu yahay inuu caawin doono haddii ay lagama maarmaan noqoto in laga takhaluso aalka ama baranbarada - Tetrix. Qiyaasta waxaa lagu muujiyay tilmaamaha.
Markaad la shaqeyneyso kiimikooyinka, hubso inaad xirato maaskaro iyo galoofyo.
Haddii aysan jirin natiijooyin, iyo Injirta geedku waxay sii wadaan inay ku faafaan hareeraha guriga, waxay u baahan yihiin daaweyn taxadar leh dhismaha oo ay sameeyaan khubaro takhasus leh.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan sida loo tuurayo injirta qoryaha ee aqalka:
Sidaa daraadeed, injirta qoryaha waa shakhsiyado yaryar oo matalaya nooc hooska ah. Kala duwanaanshaha muuqaalka xun. Khatarta ugu weyn ee guriga ayaa ah dhirta guriga - cunista xididdada, caleemaha, dhimashada. Man iyo xayawaanku ma qaniinaan. Iyada oo ay muuqato muuqaalka dhowr qof, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo la dagaallanka iyaga.